I-China Great Quality Concrete Accelerator, Factory Price Manufacture and Factory | I-Fluffier
Ukusekelwa kwezobuchwepheshe ku-inthanethi, Okunye
Amandla Wesixazululo Sephrojekthi:
Isixazululo esiphelele samaphrojekthi, LUTHO
ukwakha izithasiselo zamakhemikhali
Isisheshisi sikakhonkolo se-RN-2 siwuhlobo lwe-ejenti entsha esheshisayo, ukusebenza kwayo kobuchwepheshe kanye nenzuzo yezomnotho ephakeme kunaleyo mikhiqizo efanayo emakethe yasekhaya. Ummoba usetshenziswa kabanzi kumaphrojekthi kagesi ophehlwa ngamanzi phakathi kukaloliwe, umgwaqo onguthelawayeka, imigudu, izimayini zamalahle nezindawo eziphehla ugesi ngamanzi, kanye namanye amaphrojekthi adinga ubuchwepheshe bokumisa ngokushesha.Impushana yalo mkhiqizo impunga, uketshezi alunambala noma luphuzi ngokukhanyayo. Ine-alkaline ebuthakathaka, ayinabuthi, ayishi, ayinawo usawoti we-chlorine, futhi ayinawo umthelela wokugqwala kubha yensimbi. Umthamo wempushana ungama-4-6%, kanti uketshezi luyi-2-5%,
I-ejenti yokusetha esheshayo ye-RN-5 inokuvumelana nezimo ezinhle kusimende, iyasetha ngokushesha futhi iba lukhuni ngesikhathi sokuqala sokusetha esingaphansi kwamaminithi angu-5 futhi isikhathi sokusetha sokugcina singaphansi kwemizuzu eyi-10. Njengoba amandla okucindezela angu-1d engekho ngaphansi kwe-Mpa, no-28d
amandla okucindezela angaphansi kuka-75%, ahambisana nesidingo se-JC477-005 "Izingxube ze-Flash setting zikakhonkolo ofuthiwe". Ukhonkolo ofuthiwe olungiselelwe ngalo mkhiqizo unokulahlekelwa amandla okuphansi, izinga eliphansi lokuphindaphinda kanye nesifutho sokuqala esiphezulu
ukujiya, kuzuzisa ukuthuthukisa ikhwalithi nokuqina kwamaphrojekthi kakhonkolo afuthwe ngezinzuzo ezisobala zobuchwepheshe nezomnotho.
Izinyathelo zokulwa nokugqwala kufanele zithathwe lapho kusetshenziswa esizeni ngesilinganiso esinembile. Impushana kufanele isetshenziswe ngemva kokuvula isikhwama, kuyilapho uketshezi kufanele luvalwe ukuze luvikeleke. Ukuze kwakhiwe ukhonkolo olufuthiwe, kungakuhle ukusebenzisa usimende omusha we-portland. Ngoba uma usimende we-portland ojwayelekile, usimende we-slag portland uhlanganiswa umswakama ekushiseni okuphansi umphumela wokusetshenziswa uzothinteka. Ngokhonkolo ofuthiwe, kukhethwa amatshe noma amatshe anesayizi enkulu yezinhlayiyana ezingekho ngaphansi kuka-20 mm nesihlabathi esimahhadla esiphakathi esine-fineness modulus engu-2.8-3.5
Ojantshi, imigudu, imigwaqo emikhulu, izimayini
Izibalo/Imininingwane elawulwa ngaphakathi
Okwedlule: Intengo yasefekthri i-admixture Izithasiselo zikasimende zosizo lokugaya usimende
Olandelayo: Ikhwalithi Enhle I-Accelerator Enkulu Yenani Elihle
I-Accelerator ne-Retarder Kukhonkolo
Isengezo se-Accelerator sikakhonkolo
Inhlanganisela ye-Accelerator Concrete
Umenzeli we-Accelerator Kakhonkolo
Ama-Agent Accelerator Akhonkolo
Izinhlobo ze-Accelerators zikakhonkolo
I-Accelerator Esetshenziswa Ukhonkolo
I-Factory Sales Concrete Accelerator
I-Accelerator Enhle Yekhwalithi Enhle
High Quality Concrete Accelerator
I-Accelerator Ephansi Yentengo Ephansi
I-Accelerator Yebanga Eliphezulu Eliphezulu
I-Accelerator Yezinga eliphezulu Eliphezulu
I-Accelerator Yekhwalithi ephezulu